The Express Time ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » The Express Time ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။
Posted by အာဂ on May 11, 2012 in Myanma News, News | 25 comments
မှတ်ချက်။ ။ သူကြီးတင်ပြသော NLD & Media ပိုစ် အရ ဖြစ်ပေါ်နေသောပြသာနာများကို နှစ်ဦး၂ဖက်အမြင်ဖြင့် မြင်သာအောင်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
The Express Time ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖေ့စ်ဘုတ် မှာတင်ထားတာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။
မှတ်ချက် ။ ။ ဦးကြောင်ဂျီးလေးသံနှင့်ဖတ်ရန်
မှန်တယ်။ ဘာပဲပြောပြော သူတို့ ဂျာနယ် နာမည်ကတော့ နည်းနည်းလူသိသွားမယ်ထင်တယ်။ ဒါကလည်း ကြော်ငြာနည်းတစ်မျိုးလားတောင် မသိဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ နာမည်ရချင်ရင် ဒီလိုလုပ်တတ်တာ မြန်မာ ပြည်က ဂျာနယ်တွေလှည့်ကွက်လည်းပါတယ်လို့ထင်မိတယ်။
UMFCCI အသင်းချုပ်ရုံး၌ ၉.၅.၂၀၁၂ နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း (မြန်မာ) ၏ စတုတ္ထအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားတွင် သတင်းရယူရန် ရောက်ရှိလာသော Express Time ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ ပါတီဝင်တစ်ဦးက ဥပဒေမဲ့ ရိုင်းပြစွာ ပြုမူဆက်ဆံခဲ့ခြင်း၊ “မင်းတို့က ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ မီဒီယာလုပ်ငန်း လုပ်နေတာကွ၊ ငါတို့က ထောင်ကျခံပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာ´´ ဟူသော မီဒီယာသမား များအပေါ် ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေရန် တစ်ဖက်သတ် ပုတ်ခတ်စော်ကားသည့်စကားများ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ် The Messenger ဂျာနယ်မှ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်သည်။
ယခင်ကလည်း အလားတူ ဖြစ်ရပ်များ ရှိခဲ့ပါသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် ယခုဖြစ်ရပ်အပေါ် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည့်အခြေအနေတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာအောင် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါရန် The Messenger ဂျာနယ်မှ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
ဒါက The Messenger ဂျာနယ် ရဲ့ အာဘော် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။ ဘယ်သူမှန်သလဲဆိုတာက တော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ် အရပ်ကတို့ရေ..။ အမှိုက်က စပြီးတော့ ပြဿဒ်မီးမလောင်ဖို့တော့ လိုတယ်လို့ထင်မိတာပါပဲ။
သဂျီးပို့ စ်ထဲမှာ မန့် ခဲ့တာ စောသွားပြီလား မသိဘူး ဂျာ
ဘယ်သူပြောတာ အမှန်မှန်း အရမ်း သိချင်စမ်းပါဘိ
၂ ခုဖြစ်နေတော့ ၂ ခါမန့်ရတာပါ။
ဒါပေမယ့်လဲလေ. NLD ထဲမှာလဲ စုန်းပြူးလိုကောင်တွေ၊သာကူးတွေ
မနည်းဘူးနော်။ခုမှ ထောင်လွှားနေကြတာ။သူတို့ လုပ်စာထိုင်စားနေ
အမလေးလေး. အနီ(၈)ခုတောင်ပါလားနော်။ငါ့နှယ်နော်. စုန်းပြူးရှိလို့ ရှိတယ်
မယုံမရှိနဲ့ ဗျို့ ။တကယ်အခွင့်အရေး ရမယ်လဲကြုံရော. သူတို့ ကိုသူတို့အမာခံလိုလို၊
စွမ်းအားရှင်လိုလို ပုံစံတွေနဲ့ ။အော် လောဘ. လောဘ
ဘယ်သူမှားတယ် မှန်တယ် တော့မသိပါ။
ဒီပြဿနာမသေးဘူး မသေးဆိုကြီးဒယ် ကြီးဒဲ့နောက်ဒေါ့ ဘယ်သေးမဒုံး
အဘ ဘိုးမင်းဂေါင်ဆီ ခေါ်သွားပြီး သစ္စာရေတိုက်
သစ္စာဖေါက်တဲ့ကောင် ပေါ်တာထိဘာဇေ ဘာညာပေါ့
ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည် နားမှာ အနီးကပ် သက်တော်စောင့်လုပ်နေတဲ့ လူတွေအကုန်လုံး ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည် စိတ်ကြိုက်ရွေးခံ့ထားတဲ့ လူတွေကြီးပါ။ ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည် ကသူအနီးနားမှာ သူတို့ ပြောတဲ့ စုန်းပြူးလိုလူကို ထားရလောက်အောင် တုံးလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ဘူး။ သေချာသိချင်ရင် အဲဒီသက်တော်စောင့်တွေမှာ ဘယ်လိုသမိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာ သေသေချာလေ့လာ သင့်တယ်။
လုံခြုံရေးကလဲဒေါ်စုလုံခြုံရေးကလွှဲလို့ 
ကဲဒါ ဖေ့ဘွတ်မှာ ထပ်တင်ထားတဲ့ NLD ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်။
အဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာ လူကောင်းတွေရှိသလို စုန်းပြူးတွေပါတတ်ပါတယ်—-၊
အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ မိထ္ထီလာနာရီစင်အနီး ကားတွေပိတ်၊ ဆက်သွါးလို့မရဖြစ်နေလို့ ရှေ့မှပိတ်ခံနေ တဲ့ ကားတစ်စီးကိုဘေးကပ်ဘို့အကူညီတောင်းတာ့၊ မဖယ်ပေးပဲနောက်မှကားတွေအရင်ရှင်း ပါလားပြော
လို့ ၊တာဝန်ရှိသူတွေမှနောက်ကားတွေကိုတစ်ချို့ နောက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်း၊ဘေးချခိုင်းနှင့်ရှင်းလိုက်တော့ ကားမောင်းလို့ရသလောက်လမ်းရှင်းပြီး၊နောက်ဆုံးထီးတည်းကျန်ရစ်တဲ့ ကားတစ်စီးပဲလမ်းပေါ်ပေကပ် ရပ်ထား တယ်၊စောစောကကားပါပဲ၊အဲဒါ ယာဉ်ထိမ်းရဲကပါအဲသည်ကားကိုလာပြောပေမည့်ကား ဆရာမ ရှိဘူးဆိုပြောတယ်။
မှာထိုင်ကြည့်နေကြပြီး၊သူများတွေသာရှင်းခိုင်းပြီးသူတို့အလှည့်မှာတော့ပေကပ်ရပ်နေတာအထင်ရှားတွေ့လိုက်ရတယ်၊ အဲသည်ကားမှာ ——- မီဒီယာလို့ တံဆိပ်တပ်ထားပါသတဲ့ဗျား။
ဒါပေမည့် သည် အကြောင်း ကိုဘယ် သူ့မှမဖွခဲ့ကြပါဘူး၊ခုလည်းဖွဘို့မရည်ရွယ်ပါဘူး၊ပြောချင်တာက
ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေရန် ပွဲစီစဉ်သူတွေ မှ သေချာစည်းကမ်းကြိုတင်သတ်မှတ် အသိပေး၊နေရာ၊လုပ်ကိုင်နိုင် ခွင့် ဘောင်တွေ သတ်မှတ်ဘို့၊ကြီုတင် အသိပေး ဘို့ လိုသလို၊ဆိုင်ရာ၊သတင်းထောက်၊လုံခြုံရေးအဖွဲအစည်းများမှလည်း၊မိမိတို့တာဝန်ထမ်းသူတွေကို၊အမည်၊တာဝန်၊အဖွဲ့စည်းနာမည်မှတစ်ကွ၊ရင်ဘတ်မှစာလုံးကြီးကြီး၊လူမြင်သာအောင်ရေးထိုးစေပြီး၊မကြေနပ်က
ဒါဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိမ်းသွားကြမှာပါ၊ ချစ်စကိုရှေကြစေမှာပါပဲ။
တယောက် တမျိုး အမျိုးမျိုးပြောနေပေမဲ့အရေးကြီးတာက တော့ အမေစုရဲ့ လုံခြုံရေးပါပဲ ခုတလော သတင်းတွေ အများကြီးကြားနေရတယ် တချို့ မီဒီသမားတွေ SB ရဲ့အရိုးကိုက်နေတယ်ဆိုလားပဲ အမေစု ကိုမီဒီသမားဟန်ဆောင်ပြီး ဖဲ့ သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒီအတွက် အမေစု ၇ဲ့ လုံခြုံရေးတွေ အနေနဲ့အမေစု လုံခြုံရေးအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့် နဲ့ တားဆီးပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျာ
NLD ကသူတောင်းစားတွေ ခုမှလာပြီးဆောက်ကြီးကျယ်မနေနဲ့ ထောင်ကျခံပြီးတစ်ကယ်လုပ်တဲ့ကောင်ကနည်းနည်း မင်းတို့လိုကောင်တွေ အလုပ်မ၇ှိအကိုင်မ၇ှိလို့ 190 110 တွေ လူ၇ှိန်အောင်ဝင်လုပ်ပြမနေနဲ့။NLD အ၇ှိန်ကျတယ် မင်းတို့ကောင်တွေက အ၇င်ကကြံ့ဖွံ့မှာလည်းလုပ်တာတွေလည်းလူတိုင်းသိတယ်
ထောင်ကျခံပြီးနိင်ငံေ၇းလုပ်တယ်ပြော၇အောင် မင်းတို့ထောင်ကျလို့လူထုကြီးဘာကောင်းသွားလို့လဲ “ပေးဆပ် တယ် ပေးဆပ်တယ်”ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မပြောနဲ့ကွာ ငါ့တို့လိုချင်တာ ပေးဆပ်မယ့်နိင်ငံေ၇းသမားထက် လက်တွေ့မှာ လူထုအတွက်အခွင့်လမ်းတွေကိုချပေးနိင်တယ့် Efficient ဖြစ်တယ့်လူတွေပဲလိုချင်တယ် မင်းတို့ကောင်တွေ
NLD မှာဝင်ပြီး အာသီးေ၇ာင်ချင်၇င် အိမ်ကဆန်အိုးပြည့်အောင်အ၇င်ဖြည့်ပြီးမှပဲ ပေးဆပ်တော့ကွာ မျိုးမစစ်ကောင်တွေ
မင်းရောထောင်ထဲကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်ဝင်ရဲလား။ ဘယ်လိုလဲ ၀င်ကြည့်မလား။
ကိုယ့်ဘ၀တခုလုံး နှစ်ပေါင်းများစွာနေနိုင်ရဲ့လား။ ထောင်ကျလို့ပြည်သူတွေဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲ
ဆိုတာကို မင်းမေးတာ တော်တော်ဆိုးတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ထောင်ကျခံတဲ့သူတွေကို
စော်ကားတာပဲ။ လူထုအခွင့်အလမ်းတွေချပေးနိုင်မယ့် သူတဲ့လား
ဘယ်သူမှ ဘာမှမပြောရဲပဲသေနတ်ကိုကြောက် လုပ်သမျှညိမ်ခံနေခဲ့ရတဲ့အချိန်တုန်းက ဘယ်သူတွေက အဖမ်းခံပြီး
NLD ကိုသူတောင်းစားလို့ပြောရအောင် မင်းကကော ဘာလဲ … ချီးလရိန်းသာသာနဲ့ ၀င်မန့်မနေနဲ့
NLD ကိုသူတောင်းစားလို့ပြောရအောင် မင်းကကော ဘာလဲ … ချီးဘရိန်းသာသာနဲ့ ၀င်မန့်မနေနဲ့
ရွှေကြည်အမြင်ပြောရရင် ဒီကစ္စဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။
အန်တီဟာ ငါ့လူလာမထိနဲ့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါ့လူမှန်တယ်ဆိုတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါ။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျယ်ကျယ်မဖြစ်အောင် ကျေနပ်လောက်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ
အခုက ဖွတာပါ အကျယ်ဖြစ်အောင်ကို သက်သက်ဖွတာပါ။ အဖွဲ့အစည်းအစုံကိုစာထုတ်ပြီး
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အပုတ်ချပုတ်ခတ်တာလို့မြင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ လုပ်စရာတွေအများ
ကြီးပါ။ ဒီလိုကိစ္စတွေဟာ အာရုံနောက်စရာတွေပါ။ သူ့အခွင့်အရေးငါ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပြိုင်နေကြတာလား၊ အဖွဲ့အစည်းချင်းပါဝါပြိုင်ချင်တာလား။
သတင်းထောက်တွေကို ကြောက်နေရမှာလား။ ဘာလုပ်လုပ်လွှတ်ပေးထားရမှာလား။
အသက်စွန့်ပြီး သတင်းယူရမဲ့နေရာတွေကအများကြီးပါ ကချင်တို့၊ ကရင်တို့မှာရှိနေပါတယ်။
ပြည်သူတွေကိုအဲဒီကသတင်းထူး၊ သတင်းဦး၊ သတင်းမှန်တွေကို ပြည်မကပြည်သူတွေက
သိချင်နေပါတယ် အဲဒီနေရာတွေကိုသွားကြပါ။ ရိုက်ခဲ့ပါဓါတ်ပုံတွေ ပြည်သူတွေကျေးဇူးတင်ချင်လွန်းလို့။
ကျုပ်ရှေ့မှာကျုပ် အထက်လူကြီးကို ဓာတ်ပုံတွေတဖြန်းဖြန်း နဲ့မျက်စိကြိမ်းအောင်အားရတရ အိုဗာတင်းပြီး ရိုက် နေရင်တော့ကျုပ်လဲ အနည်းနဲ့အများပြောမိမှာပဲ။